Ukulawula kwimeko yemozulu ngokuchasene neShell | Law & More B.V.
Blog » Ukulawula kwimeko yemozulu ngokuchasene neShell
Ukulawula kwimeko yemozulu ngokuchasene neShell
Isigwebo seNkundla yeSithili saseHague kwityala likaMilieudefensie nxamnye neRoyal Dutch Shell PLC (emva koku: 'RDS') sisiganeko esibalulekileyo kwityala lemozulu. Okwe-Netherlands, eli linyathelo elilandelayo emva kwesiqinisekiso esisisiseko sesigqibo se-Urgenda yiNkundla ePhakamileyo, apho urhulumente wayalelwa ukuba anciphise ukukhutshwa kwawo ngokuhambelana neenjongo zesiVumelwano saseParis. Ngethuba lokuqala, nayo inkampani efana neRDS inyanzelekile ukuba ithathe inyathelo ekuchaseni utshintsho lwemozulu oluyingozi. Eli nqaku liza kudwelisa izinto eziphambili kunye nefuthe lalo mthetho.
Okokuqala, ukwamkelwa kwebango kubalulekile. Phambi kokuba inkundla ingene kwizinto zebango loluntu, ibango kufuneka lamkelwe. Inkundla igwebe ukuba kuphela zizenzo ezihlangeneyo ezisebenzela iimfuno zezizukulwana zangoku nezizayo zabemi baseDatshi ezamkelekileyo. Ezi ntshukumo, ngokuchasene nezenzo ezinceda iimfuno zabemi behlabathi, zazinomdla ofanayo. Kungenxa yokuba iziphumo eziza kufunyanwa ngabemi baseDatshi kutshintsho lwemozulu zahluka kancinci ukuya kunabemi behlabathi liphela. I-ActionAid ayibonisi ngokwaneleyo iminqweno yabantu base-Dutch ngeenjongo zayo ezibanzi ezibanzi. Ke ngoko, ibango layo labhengezwa njengengamkelekanga. Abamangali ngabanye babhengezwe njengabangamkelekanga kumabango abo, kuba khange babonakalise umdla owoneleyo wokuba bamkeleke ukongeza kwibango elihlangeneyo.
Ngoku ukuba amanye amabango afakiweyo abhengeziwe njengokwamkelwa, inkundla ikwazile ukuwavavanya ngokukuko. Ukuze kuvunyelwe ibango likaMilieudefensie ukuba i-RDS inyanzelekile ukuba ifezekise ukuncitshiswa kokukhutshwa kwe-45%, iNkundla kuqala kuye kwafuneka ibone ukuba olo xanduva luxhomekeke kwi-RDS. Oku kuye kwafuneka kuvavanywe ngokwesiseko somgangatho ongabhalwanga wokhathalelo lobugcisa. 6: 162 DCC, apho zonke iimeko zetyala zidlala indima. Iimeko ezithathelwe ingqalelo yiNkundla zibandakanya oku kulandelayo. I-RDS iseka umgaqo-nkqubo weqela lonke leqela leShell eliza kwenziwa zezinye iinkampani ezikwiqela. Iqela lakwaShell, kunye nabanikezeli kunye nabathengi, linoxanduva lokukhutshwa kwe CO2, okuphezulu kunokukhutshwa kwamazwe aliqela, kubandakanya iNetherlands. Oku kuphuma kukhokelela kutshintsho lwemozulu, iziphumo zazo ezivakala ngabahlali baseDatshi (umz. Kwimpilo yabo, kodwa nanjengomngcipheko ngokwasemzimbeni ngenxa, phakathi kwezinye izinto, ukunyuka kwamanqanaba olwandle).
Iziphumo zotshintsho lwemozulu olufunyanwa ngabemi baseDatshi, phakathi kwabanye, zichaphazela amalungelo abo oluntu, ngakumbi ilungelo lokuphila kunye nelungelo lokungaphazanyiswa kubomi bosapho. Nangona amalungelo oluntu esebenza phakathi kwabemi norhulumente kwaye ke ngoko akukho zibophelelo ngqo kwiinkampani, iinkampani kufuneka ziwahloniphe la malungelo. Oku kuyasebenza ukuba amazwe asilele ukukhusela kulwaphulo mthetho. Amalungelo oluntu ekufuneka iinkampani ziwahloniphe nawo ayabandakanywa umthetho othambileyo izixhobo ezinje nge Imigaqo ekhokelayo ye-UN kwishishini nakumalungelo oluntu, ivunyiwe yi-RDS, kunye nezikhokelo ze-OECD zamaShishini aMazwe ngaMazwe. Ukuqonda okukhoyo kwezi zixhobo kunegalelo ekutolikweni komgangatho wokhathalelo ongabhalwanga phantsi kwesiseko esinokuthi sithathelwe uxanduva lweRDS, ngokwenkundla.
Uxanduva lweenkampani ukuhlonipha amalungelo oluntu luxhomekeke kubuzaza bempembelelo yemisebenzi yabo kumalungelo oluntu. Inkundla ithathe oku kwimeko ye-RDS ngokwenyani echazwe apha ngasentla. Ngaphaya koko, ngaphambi kokuba olo xanduva luthathwe, kubalulekile ukuba inkampani ibe namathuba aneleyo nefuthe lokuthintela ulwaphulo-mthetho. Inkundla ithathe ukuba kunjalo kwaye iinkampani zinempembelelo kuyo yonke ixabiso lexabiso: Ngaphakathi kwinkampani / kwiqela ngokwenziwa komgaqo-nkqubo nakubathengi kunye nabanikezeli ngonikezelo lweemveliso kunye neenkonzo. Ngenxa yokuba ifuthe likhulu kwinkampani ngokwayo, i-RDS iphantsi koxanduva lokufezekisa iziphumo. I-RDS kufuneka yenze iinzame egameni lababoneleli kunye nabathengi.
Inkundla ivavanye ubungakanani beli xanduva ngolu hlobo lulandelayo. NgokwesiVumelwano saseParis kunye neengxelo ze-IPCC, imeko eyamkelweyo yokunyuka kwamaqondo obushushu inomda ukuya kuthi ga kwi-1.5 degrees Celsius. Unciphiso lwebango lwe-45%, ngo-2019 njengo-0, kuxhomekeke kwinkundla ngokufanelekileyo ngokuhambelana neendlela zokunciphisa njengoko kucetywayo yi-IPCC. Ke ngoko, oku kunokwamkelwa njengesinyanzelo sokunciphisa. Olo xanduva lunokumiselwa kuphela yinkundla ukuba i-RDS iyasilela okanye isoyikisa ukusilela kolu xanduva. Inkundla ibonakalise ukuba le yeyokugqibela kunjalo, kuba umgaqo-nkqubo weqela awonelisekanga ngokwaneleyo ukuba ushiye isoyikiso sokophula umthetho.
Isigqibo kunye nokuzikhusela
Inkundla ke ngoko iyalele iRDS kunye nezinye iinkampani kwiqela leShell ukuba banciphise okanye babangele ukuba kuthintelwe umthamo odityanisiweyo wonyaka wazo zonke izinto ezikhutshwa yi-CO2 kwiatmosfera (Umda woku-1, 2 nowesi-3) onxulunyaniswa nemisebenzi yeqela leShell kunye nokuthengisa amandla- Ukuvelisa iimveliso ngendlela yokuba kuthi kuphela unyaka wama-2030 lo mthamo ube sele uncitshisiwe ubuncinci ngumyinge wama-45% xa kuthelekiswa nenqanaba lonyaka ka-2019. Ukuzikhusela kwe-RDS akunobunzima obaneleyo ukukhusela lo myalelo. Umzekelo, inkundla ithathele ingqalelo ingxoxo yokufaka endaweni efanelekileyo, nto leyo ethetha ukuba omnye umntu uya kuthatha imisebenzi yeqela lakwaShell ukuba kunyanzelisiwe ukunyanzeliswa, kungqinisisiwe ngokwaneleyo. Ukongeza, into yokuba i-RDS ayiloxanduva lwayo kuphela kutshintsho lwemozulu ayiyikhuphi i-RDS kuxanduva olunzima lomzamo kunye noxanduva lokunciphisa ukufudumala kwehlabathi okucingelwa yinkundla.
Oku kuyenza icace gca ukuba yeyiphi imiphumo yesi sigwebo kwezinye iinkampani. Ukuba banoxanduva lokufumana isixa esikhulu sokukhutshwa (umzekelo, ezinye iinkampani zeoyile kunye negesi), banokuthi bathathwe basiwe enkundleni kwaye bagwetywe ukuba inkampani yenza imizamo engonelanga ngomgaqo-nkqubo wayo wokunciphisa umda. Obu bungozi bokuba semngciphekweni bufuna umgaqo-nkqubo ongcono wokunciphisa ukungcola kulo lonke eli ixabiso lexabisoOko kukuthi, inkampani kunye neqela ngokwalo kunye nabathengi kunye nabanikezeli beenkonzo. Ngalo mgaqo-nkqubo, kunokuncitshiswa okufanayo nanjengoko kunyanzeliswa uxinzelelo kwi-RDS kunokusetyenziswa.
Isigwebo esibalulekileyo kwityala likaMilieudefensie nxamnye neRDS sineziphumo ezibi kakhulu, hayi kwiQela leShell kuphela kodwa nakwezinye iinkampani ezinegalelo elibonakalayo kutshintsho lwemozulu. Nangona kunjalo, ezi ziphumo zinokuthetheleleka yimfuno engxamisekileyo yokuthintela ukutshintsha kwemozulu okuyingozi. Ngaba unayo nayiphi na imibuzo malunga nesi sigwebo kunye neziphumo ezinokubakho kwinkampani yakho? Ke nceda unxibelelane Law & More. Amagqwetha ethu abaluleke kakhulu kumthetho wamatyala oluntu kwaye angakuvuyela ukukunceda.
Post edlulileyo Isivumelwano soMnikeli: Yintoni ekufuneka uyazi?
Post Next Fayila isikhalazo malunga nenkundla